Gormaa Xariga laga jarayaa Xarunta Madaxtooyada Cusub ee Gaalkacyo? (Sawiro) – Radio Daljir
Diseembar 2, 2018 5:52 g 0
C/wali Maxamed Cali Gaas Madaxweynaha Puntland ayaa lagu wadaa inuu dhawaan xarig ka jar ku sameeyo dhowr Xarumood oo dhamaan ah kuwo Muhiim ah.
Xarumaha uu madaxweyne Gaas xariga ka jarayo waxaa kamid ah Xarunta Madaxtooyada degmada Gaalkacyo ee gobolka Mudug taasoo Muddadii uu xilka hayey Madaxweyne Gaas laga hirgaliyey degmada Gaalkacyo taasoo qayb kamid ah dhismahaas uu xarigga ka jarayo.
dhinaca kale madaxweyne Gaas ayaa xarig jar ku samaynaya Isbitalka Guud ee degmada Xarfo ee gobolka Mudug kaasoo qaab isku taashi ah looga hirgaliyey degmada kadib markii Shuban uu ka dilaacay qaybo kamid ah degmadaasi.
Madaxweynuhuu Meelaha kale ee Xarig Jarka lagu samaynayo waxaa kamid ah Xarunta Saldhigga Ciidamada Booliska ee degmada Buurtinle ee gobolka Nugaal halkaas oo dhamaan ay ka socoto qaban qaabada u diyaar Garowga Xarig jarka Xarumahaas dhamaan.
Wafdiga uu hogaaminayo Madaxweyne Gaas ayaa lagu wadaa inuu dhawaan Gaaro magaalo Madaxda gobolka Mudug ee degmada Gaalkacyo iyadoo sidoo kale lagu waddo madaxweyne Gaas inuu mashaariic kale xarig kar iyo dhagax dhig ku sameeyo.
Musharrax Madaxweyne Puntland Asad Cismaan Cabdullaahi: ”Waxaa calaamad cas ii saaran laba kooxod” (dhegayso/sawiro)